Isinxephezelo soguquko kwinkontileka yomsebenzi - Law & More B.V.
Isinxephezelo soguquko senkontileka yomsebenzi: Sisebenza kanjani?
Ngaphansi kwezimo ezithile, umsebenzi onkontileka yakhe yokuqashwa iphela unelungelo lokuthola isinxephezelo esinqunywe ngokomthetho. Lokhu kubhekiselwa kukho futhi njengokukhokhwa kwenguquko, okuhloswe ngayo ukwenza kube lula ukudlulela komunye umsebenzi noma ukuqeqeshwa okungenzeka. Kepha iyini imithetho maqondana nale nkokhelo yenguquko: isisebenzi sinelungelo laso nini nokuthi inkokhelo yenguquko ingakanani ngempela? Imithetho ephathelene nokukhokhwa kwenguquko (inkontileka yesikhashana) ixoxwa ngokulandelana kule bhulogi.
Ilungelo lokukhokha ushintsho
Ngokulandela ubuciko. 7: 673 isigaba 1 seDutch Civil Code, umsebenzi unelungelo lokuthola inkokhelo yenguquko, engasetshenziselwa nezinhloso ezingahlobene nomsebenzi. Ubuciko. I-7: 673 BW icacisa ukuthi umqashi ubophezeleka ukuthi akhokhe lokhu kuziphi izimo.
* Umsebenzi unelungelo lokuthola inkokhelo yezinguquko kuphela uma lokhu kungumphumela wezenzo ezimbi noma ukweqiwa okwenziwe ngumqashi. Lokhu kwenzeka kuphela ezimweni ezibucayi kakhulu njengokuhlukunyezwa ngokocansi nokucwasana ngokobuhlanga.
Kwezinye izimo, noma kunjalo, umqashi akakhokhi inkokhelo yenguquko. Okuhlukile yilokhu:
umsebenzi ungaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili futhi usebenze ngaphansi kwamahora ayishumi nambili ngesonto ngokwesilinganiso;
inkontileka yokuqashwa nesisebenzi esifinyelele eminyakeni yobudala yomhlalaphansi iyanqanyulwa;
ukunqanyulwa kwenkontileka yokuqashwa kungumphumela wezenzo ezibucayi ezenziwe ngumsebenzi;
umqashi umenyezelwe njengongenamali noma ekumisweni okwesikhashana;
isivumelwano sabasebenzi esihlangene sisho ukuthi esikhundleni sokukhokhwa kwenguquko, ungathola ilungiselelo elizongena esikhundleni uma ukuxoshwa kwenzeka ngenxa yezizathu zomnotho. Lesi sikhungo sokufaka esikhundleni sikhona ngokuya ngemibandela ethile.
Inani lokukhokhwa kwenguquko
Inkokhelo yenguquko ifika ku-1/3 womholo ophelele wenyanga ngonyaka wenkonzo (kusukela ngosuku lokuqala lokusebenza).
Ifomula elandelayo isetshenziselwa zonke izinsuku ezisele, kepha futhi nomsebenzi owahlala isikhathi esingaphansi konyaka: (umholo ophelele otholwe engxenyeni esele yesivumelwano somsebenzi / umholo ophelele wenyanga) x (1/3 umholo ophelele wenyanga / 12) .
Inani eliqondile lokukhokhwa kwenguquko ngakho-ke lincike emholweni kanye nesikhathi umsebenzi asisebenzele umqashi. Uma kukhulunywa ngeholo lanyanga zonke, imali yesibonelelo samaholide nezinye izibonelelo ezinjengamabhonasi nezimali ezengeziwe zesikhathi esingeziwe nazo kufanele zengezwe. Uma kukhulunywa ngamahora okusebenza, izinkontileka zomsebenzi ezilandelanayo nomqashi ofanayo nazo kufanele zengezwe ekubalweni kwenani leminyaka yokusebenza. Izinkontileka zomqashi ezilandelanayo, ngokwesibonelo uma umsebenzi ekuqaleni esebenzela umqashi nge-ejensi yezemisebenzi, nazo kufanele zengezwe. Uma kube nesikhawu sezinyanga ezingaphezu kwezingu-6 phakathi kwezinkontileka ezimbili zokuqashwa kwesisebenzi, inkontileka endala ayisabalwa ekubalweni kwenombolo yeminyaka yokusebenza eyenzelwe ukubalwa kwenkokhelo yenguquko. Iminyaka lapho umsebenzi egule khona nayo ifakiwe kunani leminyaka yokusebenza kwakhe. Ngemuva kwakho konke, uma umsebenzi egule isikhathi eside ekhokhelwa umholo umqashi amxoshe ngemuva kweminyaka emibili, umsebenzi usenelungelo lokuthola inkokhelo yenguquko.
Inkokhelo enkulu yokushintshwa umqashi okufanele ayikhokhe ingu- € 84,000 (ngo-2021) futhi iyalungiswa minyaka yonke. Uma isisebenzi sidlula lesi samba esiphezulu ngokususelwa kunqubo yokubala engenhla, ngakho-ke izothola kuphela inkokhelo enguquko engu- € 84,000 ngo- 2021.
Kusukela ngomhlaka 1 Januwari 2020, akusasebenzi ukuthi inkontileka yokuqashwa kumele ngabe yahlala okungenani iminyaka emibili ngelungelo lokukhokha okuguqukayo. Kusukela ngo-2020, wonke umsebenzi, kufaka phakathi isisebenzi esinenkontileka yesikhashana, unelungelo lokukhokha ushintsho kusuka osukwini lokuqala lokusebenza.
Ngabe ungumsebenzi futhi ucabanga ukuthi unelungelo lokuthola inkokhelo yenguquko (futhi awukayitholi)? Noma ungumqashi futhi uyazibuza ukuthi ngabe uphoqelekile yini ukukhokhela isisebenzi sakho inkokhelo yenguquko? Sicela uxhumane Law & More ngocingo noma nge-imeyili. Abameli bethu abakhethekile nabachwepheshe emkhakheni womthetho wokuqashwa bayakujabulela ukukusiza.
Olandelayo Wenzani ummeli? »
Previous «Isigatshana esingaqhudelani: yini okudingeka uyazi?